Ndị uwe ojii hụrụ € 600.000 ego n'ụlọ onye ọrụ Vatican a kwụsịtụrụ | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ndị uwe ojii hụrụ € 600.000 ego n’ụlọ onye ọrụ Vatican a kwụsịtụrụ
di Paolo Tescione - November 19, 2020
Ndị uwe ojii hụrụ ọtụtụ narị puku euro ego zoro n'ụlọ abụọ nke onye ọrụ Vatican kwụsịtụrụ n'okpuru nyocha maka nrụrụ aka, ndị mgbasa ozi reportedtali kwuru.
Fabrizio Tirabassi bụ onye ọrụ nkịtị na Secretariat nke steeti ruo mgbe a kwụsịtụrụ ya, ya na ndị ọrụ anọ ndị ọzọ, afọ gara aga. Dabere na isi dị nso na Secretariat for the Economy, Tirabassi emeela azụmahịa ego dị iche iche a na-enyocha ugbu a na odeakwụkwọ ahụ.
Akwụkwọ akụkọ Italiantali nke Domani kwuru na, na iwu nke Vatican Public Attorney's Office, ndị uwe ojii Vatican na ndị uwe ojii na-ahụ maka ego Italiantali nyochara abụọ n'ime arịa ndị dị na Tirabassi, na Rome na Celano, obodo dị n'etiti etiti Italy ebe a mụrụ Tirabassi.
Nnyocha ahụ, nke hiwere isi na kọmputa na akwụkwọ, kwukwara na kpughere ngwongwo akwụkwọ ego ruru narị puku euro isii ($ 600.000). Ihe dịka narị puku euro abụọ ka a kọrọ na achọtara n'ime igbe akpụkpọ ụkwụ ochie.
A kọkwara na ndị uwe ojii chọtara ihe dị oke ọnụ ahịa ruru ihe dị ka nde euro abụọ na ọtụtụ ọla edo na ọlaọcha ọla ọcha zoro n'ime kọbọd. Dabere na Domani, nna Tirabassi nwere stampụ na ebe a na-achịkọta mkpụrụ ego na Rome, nke nwere ike ịkọwa ihe onwunwe ya.
CNA akwadoghị akụkọ ahụ n’onwe ya.
Tirabassi alaghachighị ọrụ kemgbe kwụsịtụrụ ya na Ọktọba 2019 ma o doghị anya ma ọ ka na-arụ ọrụ na Vatican.
Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ndị Vatican nyochara gbasara mmekọ na azụmaahịa ego emere na Secretariat nke Ọchịchị.
N'etiti nyocha ahụ bụ ịzụta ụlọ na 60 Sloane Avenue na London, nke a zụtara na nkebi, n'etiti 2014 na 2018, site n'aka onye ọchụnta ego Italiantali Raffaele Mincione, onye na-achịkwa oge ahụ ọtụtụ narị nde euro nke ego odeakwụkwọ. .
Akpọrọ onye ọchụnta ego Gianluigi Torzi ka ọ bụrụ onye ogbugbo n'okwu ikpe ikpeazụ maka ịzụrụ Vatican maka ihe onwunwe London na 2018. CNA kwuburu na a họpụtara Tirabassi onye isi nke otu ụlọ ọrụ Torzi ebe nwoke ahụ nọ azụmahịa mere dị ka onye intermediary maka ịzụrụ nke fọdụrụ mbak.
Dabere na akwụkwọ ụlọ ọrụ, a họpụtara Tirabassi ịbụ onye ntụzi nke Gutt SA, ụlọ ọrụ Luxembourg nke Torzi, jiri nyefee ikike nke ụlọ ahụ n'etiti Mincione na Vatican.
Ihe edere maka Gutt SA na Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés na-egosi na a họpụtara Tirabassi onye isi na 23 November 2018 wee wepụ ya na ntinye akwụkwọ ezigara na 27 Disemba. N'oge a họpụtara Tirabassi dị ka onye ntụzi, adreesị azụmahịa ya edepụtara dị ka Isi nke Ọchịchị na Vatican City.
Na mbido ọnwa Nọvemba, ndị mgbasa ozi Italiantali kwuru na Rome Guardia di Finanza egbuola akwụkwọ nyocha gbasara Tirabassi na Mincione, yana onye ọrụ banki na onye njikwa ego Vatican Enrico Crasso.
Akụkọ kwuru na enyere akwụkwọ ikike a dịka akụkụ nke nyocha a na-enyo na mmadụ atọ a na-arụkọ ọrụ ọnụ iji ghọgbuo Isi nke Steeti.
Akwụkwọ akụkọ Italiantali La Repubblica kwuru na Nọvemba 6 na akụkụ nke akwụkwọ nyocha ahụ kwuru na ndị nyocha Vatican gbara ama na ego si na Secretariat nke State gafere na ụlọ ọrụ Dubai dị na dal Mincione tupu akwụ ụgwọ ha na Crassus na Tirabassi dị ka ụlọ ọrụ maka London Construction Deal.
Akaebe ekwuputara na usoro nyocha a kwuru na anakọtara ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai wee kewaa n'etiti Crasso na Tirabassi, mana na oge ụfọdụ Mincione kwụsịrị ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ. Dubai.
Dabere na La Repubblica, onye akaebe na iwu nyocha ahụ kwupụtakwara na enwere "axis" nghọta dị n'etiti Tirabassi na Crasso, ebe Tirabassi, onye ọrụ nke odeakwụkwọ ahụ, ga-anata ego ngarị iji "duzie" itinye ego nke odeakwụkwọ ahụ na ụzọ ụfọdụ.
Tirabassi ekwughị n'ihu ọha na ebubo ndị a
Peru: enweghi oxygen, popu: ọ dịghị onye a ga-ahapụ naanị ya